Mune nzira dzakaputirwa kusvika kure mubhuku rino-kucherechedza (chitsauko 2) uye kubvunza mibvunzo (chitsauko 3) - vanyori vanounganidza dare pasina chinangwa nekugadzirisa kuchinja nyika. Nzira iyo yakafukidzwa muchitsauko chino-kuedza kuedza-yakasiyana zvikuru. Apo vatsvakurudzi vanoedza kuedza, vanogadzirisa zvakananga munyika kuti vagadzire dambudziko rakakodzero yekupindura mibvunzo pamusoro pekukonzera-uye-effect ukama.
Zvinokonzera-uye-mibvunzo mibvunzo inowanzoshandiswa mukutsvakurudza kwevanhu, uye mienzaniso inosanganisira mibvunzo yakadai seyi: Ko kuwedzera mishairidzidzisi mudzidzisi kunowedzera kudzidza kwevadzidzi here? Ndezvipi zvinokonzerwa nehombhoji mibairo pamusoro pemari yebasa? Rudzi rwemushandi wechikwata runoita sei mukana wekuwana basa? Mukuwedzera kune aya mibvunzo yakajeka, dzimwe nguva zvinokonzera-uye-inguva mibvunzo inobatanidza nemibvunzo yakawanda pamusoro pekuwedzera kwekushanda kwematric. Semuenzaniso, mubvunzo wekuti "Bhatani rinopiwe rinofanira kuve pane webhusaiti yeNGO?" Ndeye mibvunzo yakawanda pamusoro pemigumisiro yemakasiyana emakanda mavara pamipiro.
Imwe nzira yekupindura mhaka-uye-inguva mibvunzo ndeyokutarisa mapeti mune data iripo. Semuenzaniso, kudzokera kumubvunzo pamusoro pemigumisiro yevadzidzisi vemitero pamudzidzi wekudzidza, unogona kuverenga kuti vadzidzi vanodzidza zvakawanda muzvikoro zvinopa vadzidzisi vehomwe yakakwirira. Asi, izvi kuratidzira kuratidza kuti misha mikuru inokonzera vadzidzi kudzidza zvakawanda here? Kwete kwete. Zvikoro apo vadzidzisi vanowana zvakawanda zvinogona kunge zvakasiyana nenzira dzakawanda. Semuenzaniso, vadzidzi vari muzvikoro nevadzidzisi vepamusoro vanogona kuwana kubva kumhuri dzakapfuma. Nokudaro, chinoratidzika semagumisiro evadzidzisi chaigona kungobva pakuenzanisa marudzi akasiyana evadzidzi. Izvi unmeasured kusiyana pakati vadzidzi dzinonzi confounders, uye, vose zvavo, zvinobvira confounders zvakakwana kunoparira zvinetso vaongorori 'kukwanisa kupindura mibvunzo chikonzero-uye-chaizvoizvo nokutsvaka mapatani mune yaivapo mashoko.
Imwe nzira yekugadzirisa dambudziko revanopesana ndeyekuedza kuenzanisa zvakajeka nekugadzirisa maonero akasiyana pakati pemapoka. Semuenzaniso, unogona kukwanisa kutora faira yemutero kubva kune dzimwe nzvimbo dzehurumende dzewebsite. Zvadaro, unogona kuenzanisa chikoro chekuchikoro mune zvikoro apo matengo emisha akafanana asi mishairidzidzisi edzidzisi akasiyana, uye iwe uchiri kungowana kuti vadzidzi vakadzidza zvakawanda muzvikoro nepamusoro mudzidzisi kubhadhara. Asi kune zvakawanda zvakawanda zvinogona kuitika. Zvichida vabereki vevadzidzi ava vanopesana muhutano hwavo. Kana zvichida zvikoro zvinopesana muhukama hwavo kumatarenda evanhu vose. Kana kuti zvichida zvikoro zvine mudzidzisi mukuru zvinobhadharawo zvakanyanya kubhadharira vatungamiri, uye mubhadharo mukuru, kwete mudzidzisi kubhadhara, ndeyeicho chiri kuwedzera kuidzidza kwevadzidzi. Iwe unogona kuedza kuenzanisa nekugadzirisa zvinhu izvi zvakare, asi urongwa hwezvinogona kuitika huripo husingaperi. Mune mamiriro ezvinhu mazhinji, iwe haugoni kuenzana nekugadzirisa zvose zvinogona kuitika. Mukupindura dambudziko iri, vatsvakurudzi vakagadzira nzira dzakasiyana-siyana dzekugadzirisa zvinokonzerwa nedzimwe dzisiri-kuongorora-ndakakurukura dzimwe dzezvayo muchitsauko 2-asi, kune mamwe marudzi emibvunzo, maitiro aya haagone, uye kuedza kunopa chivimbiso zvimwe.
Ongororo dzinoita kuti vatsvakurudzi vafambe mberi kwekubatana kwemashoko munharaunda chaiyo kuitira kuti vanyatsopindura mimwe mibvunzo-uye-inguva mibvunzo. Mune mamiriro ekufananidzira, kuongororwa kwaiwanzove kwakaoma uye kunodhura. Iye zvino, muzera re digital, zvigadziro zvekugadzirisa zvishoma nezvishoma zvinopera. Hazvisi nyore chete kuedza zviyero zvakadai zvakaitwa kare, zvino zvinoita kuti tishandise mhando itsva dzekuedza.
Mune zvandakanyora kusvikira zvino ndave ndisingatauri mumutauro wangu, asi zvakakosha kusiyanisa pakati pezvinhu zviviri: kuongororwa uye kuongororwa kwakaitwa nemaitiro. Mukuedza , mumwe muongorori anopindira munyika uye anoyera mugumisiro. Ndakanzwa nzira iyi inotsanangurwa se "perturb uye inocherechedza." Mukutsvaga kunongorongedzwa kwakaitwa nemutsvakurudzi anopindira kune vamwe vanhu uye kwete kune vamwe, uye muongorori anotsanangura kuti ndeupi vanhu vanogamuchira kupindira nemaitiro (semuenzaniso, kubvisa mari). Kuongorora kwakagadziriswa kweRandomized kunoita kuti pave nekuenzanisa kwakanaka pakati pemapoka maviri: rimwe rakagamuchira kupindira uye rimwe risina. Mune mamwe mazwi, kuongororwa kwakaitwa nemaitiro kunogadzirisa matambudziko evanopesana. Perturb-uye-kuongorora zvidzidzo, zvisinei, zvinosanganisira chete boka rimwe chete rakagamuchira kupindira, uye naizvozvo zvigumisiro zvinogona kutungamirira vatsvakurudzi kugumisa kusina kururama (sezvandicharatidza munguva pfupi). Pasinei nekusiyana kwakakosha pakati pekuedza nekuongororwa kwakaitwa randomized, vatsvakurudzi vezvemagariro evanhu vanowanzoshandisa mazwi aya zvisiri izvo. Ini ndichatevera musangano uyu, asi, pane dzimwe humwe, ndichaputsa gungano kuti ndisimbise kukosha kwekuongororwa kwakaongororwa kwakaitwa pamusoro peongororo pasina randomization neboka rinodzora.
Maitiro akaongororwa aRandomized akaoneswa kuva nzira ine simba yekudzidza pamusoro penyika yevanhu, uye muchitsauko chino, ndichakuratidza zvakawanda nezvekushandisa mazviri mukutsvakurudza kwako. Muchitsauko 4.2, ini ndichaenzanisira nheyo yekutanga yekuedza nemuenzaniso wekuedza kwe Wikipedia. Zvadaro, muchikamu 4.3, ndicharondedzera musiyano pakati peongororo yekuongorora uye minda yekuongorora uye kusiyana pakati pezviongororwa zveanorog uye zvidzidzo zvejedi. Uyezve, ini ndichataura kuti majekiti emigodhi inogona kupa zvikamu zvakanakisisa zveanorog mabhii anoedza (masimba ekudzivirira) uye analogog field experiments (kuburikidza), vose pachiyero chakanga chisingaitike kare. Zvadaro, muchitsauko 4.4, ndicharondedzera mazano matatu-kutendeseka, hutano hwehutano hwemigumisiro, uye nzira-izvo zvinokosha pakugadzira kuongorora kwakawanda. Nezvo mamiriro ezvinhu, ndicharondedzera kushambadzira kunobatanidzwa mumazano maviri makuru ekuitisa zviongorori zvemadhigiri: kuzviita iwe pachako kana kubatana nevane simba. Pakupedzisira, ndichapedza nemamwe mazano mazano pamusoro pekuti iwe unogona kushandisa sei simba rechokwadi rekuedza kwedhijito (chikamu 4.6.1) uye rondedzera zvimwe zvebasa rinouya nesimba iroro (chikamu 4.6.2).